NetWork နှင့်ပတ်သက်သော လင့်များ
၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁
Tpye of Network (ဒါကတော့ NetWoRK အမျိုးအစားလေးတွေပါ)
SAN - Storage Area Network, It can also refer with names like System Area Network, Server Area Network, or sometimes Small Area Network
CAN - Campus Area Network, Controller Area Network, and often Cluster Area Network
A LAN, local area network based on wireless network technology mostly referred as Wi-Fi. Unlike LAN, in WLAN no wires are used, but radio signals are the medium for communication. Wireless network cards are required to be installed in the systems for accessing any wireless network around. Mostly wireless cards connect to wireless routers for communication among computers or accessing WAN, internet.
မှတ်ချက်။ ကျွန်တော်က Networking & Hardware ၀ါသနာပါတော့ တတ်တယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး အဆင်ပြေမယ်ထင်တာလေးတွေတင်ထားတာပါခင်ဗျာ ။
ဒါလေးကတော့ ComPutEr နဲ့ပတ်သက်တဲ့ OnLine DicTioNarY လင့်လေးပါ။
ဒါလေးကတော့ DoWnLoaD LinK လေးတွေပါ။
ဒါတွေကတော့ နက်ဝပ်ကြိုး Straight & Cross ညှပ်နည်းလေးပါ။
ဒါကတော့ ADSL (ZTE) Installation Configuration လေးပါ။
ဒါကတော့ Router Configuration ပါခင်ဗျာ။
ဒီ virus ကကူးစက်နှုန်းမမြန်ပါဘူး။ ဆိုင်တွေမှာလဲတွေ့ရခဲပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုရင် ရှောင်ရှားနိုင်ကြစေဖို့ဆန္ဒပြုပါတယ်။ :)
Lin Lin Nge